Kuperekera magetsi - Wikipedia
(Redirected from Kupereka (magetsi))
Muchidzidzo fundoyetsimba shoko rokuti kuperekera magetsi (conduct in English) rinoreva kutakura magetsi kubva pane nzvimbo kuenda pane imwe. Simbi dzinopereka magetsi kubva panzvimbo A kuenda pana B. Apa kupereka kutaura kuti magetsi ndiwo achafamba, iyo simbi pachayo inokwanisa kusafamba asi ichifambisa magetsi. Iri shoko rokuti kupereka richafanobata kusvika pawanikwa rimwe riri nani. Simbi inopereka magetsi inogwinha nokuda kwemagetsi ayakatakura. Copper ndiyo simbi inoshandiswa kunyanya pakuperekesa magetsi nokuti inotakura zvakanaka pane dzimwe simbi, isingarase simba remagetsi.
Waya dzinotakura magetsi kubva kugwenya kuenda kuvashandisi
Kupiwa kwezita[chinja | edit source]
Apa zviri kuitwa nesimbi inotakura magetsi zvakafanana naTete vanonopereka muzukuru wavo Kundayi kwaBangamuseve uko akaroorwa asi ivo Tete pachavo vasiri kubva pavo pamusha pavanogara. Apa Tete vanonosvitsa Kundayi kumusha kwemurume wake asi yavo nzvimbo yavanogara haichinje. Iri shoko richashandiswawo kutaura kufamba kwemadziya kubva panopisa kuenda panotonhora; zvakare simbi dzinopereka madziya zvakanaka.
Chiro chinotakura kana kupereka magetsi chinonzi mherekeso yemagetsi, pahuwandu mherekeso yemagetsi zvakare. Simbi inonzi copper inoshandiswa kunyanya pakupereka magetsi.
Chiro chisingatakure kana kupereka magetsi chinonzi rutsuwa rwemagetsi. Ceramic inoshandiswa serutsuwa rwemagetsi pamapango anotsigira waya dzemagetsi nokuti iyo ceramic haitenderi kuyerera kwemagetsi mairi.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuperekera_magetsi&oldid=68979"
Ita cite nyaya iyi
This page was last edited on 22 Gunyana 2019, at 04:15.